Home » Featured » Ny iray sy tokana, Robert De Niro Opening Keynote #NABSHOWNY
Robert De Niro (mila miresaka bebe kokoa aho) dia ho lohateny ny 2018 Asehoy ny fanokafana Kat Show New York. De Niro dia angano momba ny tontolo famokarana (eo anoloana sy ao ambadik'ilay fakantsary) dia manasitrana tanteraka ny traikefa niainany tamin'ny indostrian'ny fialam-boly. Ny chat de fireside De Niro dia ho moderina amin'ny Dade Hayes, Tonian-dahatsoratra ampaham-potoana Hollywood izay hanana Q & A mifantoka amin'ny hoavin'ny sarimihetsika sy fialam-boly ataony ho an'ny fanandramana misokatra haingana.
De Niro, ny Academy Award mpilalao sarimihetsika ho an'ny sarimihetsika malaza mahazatra "Ny Andriamatoa, Fizarana II." ao amin'ny 1974 ho an'ny Actor Best Supporting "Raging Bull" ho mpilalao sarimihetsika tsara indrindra amin'ny 1980, dia nisy fiantraikany avy hatrany teo amin'ny indostrian'ny sarimihetsika tamin'ny endriny goavam-be sy ny fahatsapany madio izay nentiny ho karazana. Nanangana ny sarimihetsika momba ny sarimihetsika tao amin'ny Brian De Palma i Robert De Niro "Ny fampakaram-bady" ao amin'ny 1969. Tamin'ny 1974 dia nahazo ny loka ho an'ny Critique Film New York koa izy ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra "Mampihena tsikelikely ny rivo-doza" ary avy amin'ny National Society of Critic Film "Midika Streets."
Noraisina ihany koa i De Niro Academy Award fanendrena ho an'ny asany amin'ny: "Taxi Driver," "The Hope Hunter," "Mifohaza," ny remake of "Cap Fear" ary "Silver linings playbook." Ny tetikasa manaraka an'i Niro "The Irishman" Ao amin'ny kintany, ary mamokatra miaraka amin'ny namana efa ela i Martin Scorsese no hiara-hiasa miaraka aminy ary azo antoka fa ny manaraka manaraka an'i Kioflix dia naseho tamin'ny sarimihetsika.
"Robert De Niro dia mpilalao tantara an-tsehatra, mpamokatra ary talen'ny asa izay mitahiry am-polo taonany sy ny karazany," hoy ny filoha lefitry ny Vondron'ny mpanatanteraka sy ny raharaham-barotra NOB Chris Brown. "Voninahitra ho anay ny miarahaba azy amin'ny herintaona Kat Show New York rehefa mizara ny fahalalany sy ny traikefa niavaka tamin'ireo mpandray anjara izy. "
Ny orinasan'ny famokarana De Niro, Tribeca Productions dia namolavola tetikasa izay nahitana azy ho mpamokatra, talen'ny mpilalao ary mpilalao sarimihetsika ary notsongaina tsara "Tantaran'ny Bronx" ao amin'ny 1993 izay nanamarika voalohany ny dika voalohan'ny De Niro, ary koa, "Ilay Mpiandry Ondry Tsara" ao amin'ny 2006. Ny asa izay i De Niro manohy maneho ny heviny dia fanoloran-tena ho amin'ny tsara indrindra.
Ny Festival Festival Tribeca, izay natsangany Jane Rosenthal ary Craig Hatkoff natsangana tao amin'ny 2002, dia nampanan-karena ny orinasan-tsarimihetsika manerantany. Tao amin'ny 2009, i De Niro dia nandray ny Kennedy Center Honor noho ny asa miavaka nataony sy ny Stanley Kubrick Award avy amin'ny loka BAFTA Britannia. Noderaina i De Niro tamin'ny Cecil B. DeMille Award amin'ny lokan'ny Golden Globe 2011. Izy koa dia niasa ho filohan'ny Jury Fetiben'ny sarimihetsika 64th Cannes.
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers Las Vegas Kat Show Kat Show Registration NAB16 nabshow National Association ny ireo fahitalavitra Show Post Production World	2018-10-08
Previous: AQ Broadcast dia manomboka QScript.app ho an'ny Mobility On-Air
Next: Mpandraharaha teolojikan'i Rachel Payne, mpanentana teknolojia, mba hanamafisana ny vehivavy ao amin'ny teknolojia fiompiana